Ra'iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo mar kale kulmaya - Home somali news leader
Home NEWS Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo mar kale kulmaya
Ra’iisul Wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Rooble iyo Xubnaha Midowga Musharaxiinta ayaa maanta oo Isniin ah ku kulmaya magaalada Muqdisho, iyadoo kulankan uu daba socday kulankii khamiistii ee labada dhinac heshiiska ku gaareen, kaasoo xaalada ka jirtay Muqdisho qaboojiyay.
Kulankan qadada ayaa ka dhacaya Hotelka Decale, waxaa la filayaa in diiradda lagu saari wixii ka qabsoomay heshiiskii lixda qodob ahaa ee ay wada gaareen dowladda iyo Musharaxiinta mucaaradka.
Qodobka lixaad ee heshiiskii Horel Decale ee khamiistii ayaa dhigaya in la sii wado wada hadalada arrimaha siyaasadeed, si looga arrinsado doorashada.
Musharaxiinta ayaa doonaya inay qeyb ka noqdaan shirarka soo socda ee lagu xaliyo caqabadaha ka jiray hannaankii doorashada ee lagu heshiiyay 17 September.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in kulanka Ra’iisul Wasaaraha iyo Midowga Musharaxiinta uu barbar socon doono shir kale oo ay yeelanayaan Guddiga loo saaray baaritaanka madaxa bannaan ee dhacdadii 19 February.
Previous articleMacron’s “direct democracy” is being tested as the citizens’ panel on climate change
Next articleFrench photographer seriously injured in the attack when he covered youth violence